Fihaonambe G20 Roma: Famaranana ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny 31 Oktobra 2021 natao tao amin'ny Nuvola
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Fihaonambe G20 Roma: Famaranana ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny 31 Oktobra 2021 natao tao amin'ny Nuvola
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • malaza ankehitriny
Vao nifarana tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny G20 tany Roma. eTurboNews Nanatrika izany ny mpanao gazety Italiana Mario Masciullo. Anisan'ny lohahevitra lehibe amin'ny asa, ankoatry ny areti-mifindra sy ny vaksiny, ny krizy amin'ny toetr'andro, ny fanarenana ara-toekarena ary ny toe-draharaha any Afghanistan.
Notanterahina tao amin’ny Nuvola ny valan-dresaka famaranana ny fihaonana an-tampon’ny G20 Roma tamin’ny 31 Oktobra 2021.
Ny praiminisitra italiana, Mario Draghi, dia nanokatra ny G20, nanantena ny hisian'ny firaisankina amin'ny areti-mifindra.
Sambany no natao tany Italia ny fihaonana an-tampony.
Ho an'i Francesco Tufarelli, filohan'ny tambajotra "Europolitica", dia nilaza izy fa "zava-dehibe ny famerenana ny olombelona ho ivon'ny hetsika ara-politika sy ara-toekarena."
Hoy ny praiminisitra Draghi: "Enga anie izao tontolo izao hiara-mandeha amin'ny ady amin'ny areti-mifindra."
Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety famaranana G20 Roma nataon'ny praiminisitra Mario Draghi
G20, fifanarahana eo amin'ny Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana momba ny fanesorana ny adidy amin'ny vy sy alimo. Draghi: "Ny dingana voalohany mankany amin'ny fisokafana ara-barotra lehibe kokoa."
G20, mankany amin'ny fifanarahana midina amin'ny toetr'andro: valindrihana 1.5 degre amin'ny fiakaran'ny mari-pana eran-tany nefa tsy misy dikany afa-tsy ny fanondroana tsy misy emission "amin'ny tapaky ny taonjato"
G20, Hoy i Draghi: “Nofenoinay zava-dehibe ny teny. Ho tonga tsikelikely amin'ny taona 2050 isika ho daty tsy misy famoahana.
"Tamin'ity fihaonana an-tampony ity dia nanao izay hahazoana antoka fa mbola velona ny nofinofinay fa ankehitriny dia tsy maintsy ataontsika antoka fa havadika ho zava-misy izany", hoy ny praiminisitra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. "Farany, misy fampanantenana hanome 100 lavitrisa isan-taona ho an'ny firenena mahantra." Ary nanambara izy avy eo fa hampitombo avo telo heny ny fanoloran-tenany ara-bola ho 1.4 miliara isan-taona i Italia mandritra ny 5 taona ho avy ho an'ny tahirim-bola maitso maitso.
Ny Praiminisitra avy eo dia niditra tamin'ny antsipiriany momba ny vokatra azo, nanazava fa "nanao loharanon-karena be izahay; notandremantsika ireo fanoloran-tena ireo, ary nataontsika antoka fa mbola velona sy mandroso ny nofinofinay. Izay ataontsika no hitsarana antsika fa tsy amin’izay teneninay”, hoy ny fanamarihan’ny mpitondra maromaro. Ary avy eo dia nampanantena izy hoe: "Mirehareha izahay" amin'ny vokatra azo tamin'ny G20 fa "fanombohana ihany izao."
G20, Draghi: "100 lavitrisa avy amin'ny G20 ho an'ny firenena mahantra momba ny toetrandro."
"Fahombiazana ny G20," hoy ny praiminisitra Mario Draghi, izay nanapa-kevitra ny hanombatombana ny fihaonambe izay vao nifarana tany Roma momba ny vonjy taitra momba ny toetrandro. Fihaonana an-tampony izay, hoy izy, dia nitondra tombontsoa maro, na dia “tsy mora aza izany”. Anisan'izany, ny PM dia mitanisa ny fanavaozana ny hetra iraisam-pirenena "izay noezahina natao nandritra ny taona maro tsy nahomby", ny fetran'ny 1.5 ° C ° amin'ny salan'isan'ny fiakaran'ny maripana izay "manatsara ny fifanarahana Paris", ankoatra ny "nitondra firenena sasany." misalasala amin'ny toerana mahazatra momba ny decarbonization," miaraka amin'ny fanondro mazava an'i Rosia ary, indrindra indrindra, i Shina.
Ny fahombiazana voalohany nosoritan'i Draghi dia ny fetra farany ambony indrindra amin'ny fiakaran'ny maripana antonontonony maneran-tany, napetraka amin'ny 1.5 ° C: "Raha ny toetr'andro, sambany, ireo firenena G20 dia nanolo-tena hanatratra ny tanjona amin'ny fametrahana ny hafanana ambany. 1.5 degre miaraka amin'ny hetsika haingana sy fanoloran-tena amin'ny fotoana antonony, ”hoy izy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety farany. Nampiany koa fa “tsy hihoatra ny faran’ity taona ity ny “famatsiam-bola ho an’ny daholobe” amin’ny fananganana toby arintany vaovao.
Ny olan'ny etona aotra sy ny fanoherana nasehon'i Shina sy Rosia, izay tsy nanaiky ny fe-potoana 2050, dia manombana ny tanjona amin'ny folo taona manaraka (2060). Ny lohahevitry ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin’ny praiminisitra Draghi izay anefa dia voalaza fa afa-po, ary hita fa gaga tamin’ny fisokafana, (araka ny filazany), nasehon’ireo governemanta roa ireo.
“Tany Shina ka hatramin'ny andro vitsivitsy lasa izay dia nanantena toe-tsaina hentitra kokoa aho; nisy ny faniriana hahazo fiteny miompana kokoa amin'ny ho avy noho ny taloha,” hoy i Draghi nanampy, “i Rosia sy i Shina dia nanaiky ny porofo ara-tsiansa momba ny 1.5 C°, izay mitaky fahafoizan-tena be dia be, [ary] tsy mora ny fanoloran-tena ho amin'izany. mitazona. Mamokatra 50% ny vy maneran-tany i Shina; zavamaniry maro no mandeha amin'ny arina; tetezamita sarotra izany”. Ary amin'ny fetra ho amin'ny 2050, dia nanampy izy hoe: "Raha oharina amin'ny toe-javatra teo aloha, ny fanoloran-tena dia kely kokoa mankany amin'ny 2050 amin'ny fitenin'ny famoahana an-gazety. Tsy marina izany, fa tsy nisy teo aloha. Nisy fiovana tamin'ny fiteny feno fanantenana kokoa na dia teo amin'ireo firenena izay nilaza fa tsia hatramin'izao. "
Ary azo natao io fifanarahana io, hoy ny fanazavany, noho ny fomba fiasa mifototra amin'ny multilateralism izay misy ny fahefana rehetra manatrika: "Tao amin'ny G20 dia nahita firenena nanatona ny toeran'ny hafa tamin'ny fiteny mety izahay," hoy izy.
“Misaotra ny Masoivoho Mattiolo sy ny Sherpa rehetra aho noho ny asa vitany. Nisy zavatra niova tao amin'ny G20, izany hoe raha tsy misy ny fiaraha-miasa, dia tsy mandroso isika, ary ny fiaraha-miasa tsara indrindra fantatray dia ny multilateralism, miaraka amin'ny fitsipika nosoratana hatry ny ela ary niantoka ny fanambinana ho antsika.
Tsy maintsy ovaina miaraka ny fitsipika tokony hovaina”.
Ary manome ohatra izy: “Sambany ao amin'ny antontan-taratasin'ny G20, ao amin'ny paragrafy 30, isika dia mahita fehezanteny miresaka momba ny fomba fametrahana ny vidin'ny saribao. Miantso ireo singa isan-karazany ao amin'ny G20 izahay mba hihetsika mifanaraka amin'ny andraikiny amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo sy ny fifangaroana mifanaraka amin'ny toe-karena misy entona mampidi-doza ambany amin'ny fametrahana tanjona ho an'ny firenena mahantra indrindra. Ny rohy nahatonga ny fiovana dia ny fahatsiarovan-tena fa misy fandrosoana raha oharina amin'ny lasa miaraka amin'ny fampanantenana fanampiana avy amin'ireo firenena manankarena. Iray amin'ireo tranga izay nanapahan'i Shina sy i Rosia ny fanovana ny toerany. ”
Draghi, izay naniry mafy an'ity fihaonana an-tampony ity, dia nahatsiaro ny fanoloran-tena natao tamin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany: “Nametraka ny fototra ho amin'ny fanarenana ara-drariny kokoa izahay ary nahita fomba vaovao hanohanana ireo firenena eto amin'izao tontolo izao”, hoy ny namaranan'ny PM Draghi.
Biden: "Ho tonga amin'ny vokatra azo tsapain-tanana izahay, misaotra an'i Italia."
Ny fihaonamben'ny mpitarika ny G20 tany Roma dia namokatra vokatra "zavatra" momba ny toetrandro, ny valan'aretina COVID-19 ary ny toekarena. Nilaza izany ny filoha amerikana Joe Biden tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety farany, talohan'ny niaingany ho any Glasgow, ho amin'ny COP26, ary nisaotra an'i Italia sy ny praiminisitra Mario Draghi noho ny “asa lehibe vita”.
"Mino aho fa nanao fandrosoana azo tsapain-tanana izahay, noho ny fahavononana nentin'i Etazonia teo amin'ny latabatra" tamin'ny fifanakalozan-kevitra. Ny fihaonana an-tampony dia “nampiseho ny herin'i Amerika rehefa mifandray sy miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminay amin'ny olana.” Nanamarika i Biden avy eo fa "tsy misy afaka manolo ny fifampiraharahana mivantana amin'ny fiaraha-miasa manerantany."
Hazo iray trillion nambolena tamin'ny taona 2030
"Noho ny fahafantarana ny maha maika hiadiana amin'ny fahapotehan'ny tany sy ny famoronana karbônina vaovao, dia mizara ny tanjona lehibe amin'ny fambolena hazo 1 trillion izahay, mifantoka amin'ireo tontolo iainana simba indrindra eto an-tany." Izany dia azo vakiana ao amin'ny fanambarana farany momba ny fihaonambe G20 any Roma.
"Mamporisika ny firenena hafa izahay mba hanambatra hery amin'ny G20 mba hahatratrarana io tanjona eran-tany io amin'ny 2030, ao anatin'izany amin'ny alàlan'ny tetikasa momba ny toetr'andro, miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny sehatra tsy miankina sy ny fiarahamonim-pirenena," hoy izy.
Johnson: "Raha tsy mahomby i Glasgow dia tsy mahomby ny zava-drehetra."
"Hazavaiko fa raha tsy mahomby i Glasgow dia tsy mahomby ny zava-drehetra." Ny praiminisitra britanika Boris Johnson dia nilaza izany momba ny COP26 nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny faran'ny G20 tany Roma. "Efa nandroso izahay tamin'ity G20 ity, saingy mbola misy lalana tokony haleha," hoy izy nanampy, "Efa elaela izay no tsy niresaka izahay," hoy izy naneho hevitra momba ny fandoroana Draghi-Erdogan tamin'ny fifanomezan-tanana voalohany tamin'ny G20.
Fanehoan-kevitra avy amin'ny Huffington Post
Avy amin'ny G20 any Roma, nanantena valiny bebe kokoa sy hetsika mivaingana eo anoloan'ny ady amin'ny krizin'ny toetrandro izahay. Diso fanantenana izahay tamin'ny fifanarahana momba ny toetr'andro nosoniavina androany. Fifanarahana izay manara-penitra izay efa azo tamin'ny lasa, tsy manome fanoloran-tena mivaingana momba ny fitantanam-bola momba ny toetr'andro, manomboka amin'i Italia izay tsy nametraka ny anjara birikiny ara-drariny - farafaharatsiny 3 lavitrisa euros isan-taona - amin'ny fitambaran'ny 100 lavitrisa dolara nampanantenaina 6 taona lasa izay tany Paris ho fanoloran-tena iraisan'ireo firenena indostrialy hanampy ireo mahantra indrindra amin'ny hetsika momba ny toetrandro. Raha fintinina, tao amin'ny Nuvola Rome, ny G20 dia nahita rano mafana amin'ny ady amin'ny krizin'ny toetrandro.
Ankehitriny ny fanantenana dia ao Glasgow, izay hisokafan'ny COP26 anio, ireo lehibe eto amin'ny planeta dia afaka mahita fifanarahana hanatrarana fifanarahana momba ny toetr'andro vaovao izay afaka mitazona ny tanjona 1.5 ° C ho velona amin'ny fifanarahana Paris nosoniavina tamin'ny 2015, saingy koa mba hanafainganana ny fampifanarahana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, hiatrehana ny fatiantoka sy ny fahasimban'ny vondrom-piarahamonina tena iharan'ny vonjy taitra, fa koa ary ambonin'izany rehetra izany dia mamatsy ara-dalàna ny hetsika ataon'ireo firenena mahantra ary mameno ny Boky Torolàlana, izany hoe ny fitsipika fampiharana ny fifanarahana, ataovy am-perinasa ny farany.
Fifanarahana momba ny varotra sy Afghanistan.
Distance on Libya.
Nitondra tantaram-piainany ho fanomezana hanasonia ny fandriampahalemana i Tiorkia.